Iko kushanduka kwekudzora kwevabereki pane iOS uye iPadOS nekuburitswa kweNguva yekushandisa API | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 02/08/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 30/07/2021 10:13 | iOS 15, Noticias
iOS 12 yakaunzwa muna2018 seti yemabasa akanyorwa pasi pezita reNguva yekushandisa. ita kuti mushandisi azive nezvekushandisa kwemidziyo pamwe nekuedza kuvimbisa kugara zvakanaka kwedigital. Kunyanya tichifunga nezvekuwedzera kwenhamba yemaawa anoshandiswa nevanhu pamberi peescreens. Gare gare, Apple yakashandisa sechishandiso che Kudzora kwevabereki. Mwedzi mishoma yapfuura, mu WWDC 2021 yakatanga kuziviswa kuvhurwa kweNguva yekushandisa API kune vanogadzira, nokudaro kubvumidza chimiro chepamutemo chekutonga kwavo maapp.
Apple inovhura Nguva yekushandisa API kune vanogadzira
Vagadziri vanogona kushandisa iyo API mune yevabereki kudzora kunyorera kutsigira yakatowanda huwandu hweruzivo rwevabereki maturusi. Iyo API inopa vanogadzira vane akakosha maficha senge epakati kurambidzwa uye kuongorora kweyekushandisa chiitiko kuitira kuti kuvanzika kuve pamberi.
Mazhinji maapplication akatangwa kubvira 2018 pamwe nekubatanidzwa kwe Shandisa time mune Apple ecosystem Ivo vakabviswa nekuda kwekutyora mirau yeApp Store. Mazhinji emitemo iyi anga ari ekubatanidzwa kwekutonga kwezviitiko nevanhu vechitatu vasina kutonga kwepakati kubva kuApple. Asi zvakadaro, nekusvika kweNguva yekushandisa API, inoitwa kuti iwanikwe kune vanogadzira chimiro chekutonga kuve nechokwadi chekuvanzika kwevashandisi.
Rangarira kuti Nguva Yekushandisa inoumbwa nesarudzo dzinoverengeka, pakati padzo dziri: nguva yekusaita basa, inogara ichibvumidzwa, muganho wekushandisa kwemaapp, muganho wekutaurirana uye zvirambidzo. Aya maturusi mashanu anotendera mushandisi gadzirisa kutonga kwenguva yaunoshandisa pamberi pechigadzirwa. Uye zvakare, kwete chete iOS uye iPadOS zvine izvi tutira yezvishandiso, asi macOS inoisanganisawo.
Zvakanakira kuvhura iyo API Airtime pane iOS, iPadOS, uye macOS inowira zvakanyanya kuvabereki. Uye mukutonga kwavanoita pamusoro pevana vavo pavanoshandisa Apple zvishandiso:
Ivo vanogona kutarisa kuburikidza nhoroondo yezvibereko, kubhurawuza, nezvimwe. Kuti uvadzivirire vasvike pane zvisingadiwe kana kushambadzira pamapuratifomu ekushambadzira.
Vanogona kudzinga vana vavo kubva chero kupi kwavanofunga kuti hakuna kukodzera.
Mabasa ezuva nezuva anogona kuteverwa panhare, makomputa kana mapiritsi.
Izvo zvinotenderwa kuongorora makirasi uye epamhepo maitiro evana vako.
Iyo skrini nguva furemu inokupa iwe maturusi aunoda kubatsira vabereki nevachengeti kuongorora mashandisiro evana vewebhu.
Sekureva kwaApple, iyi API yekumisikidza fomati inobvumidza vanogadzira kuti vateedzere zvinoitwa nemaapps avo mumhando dzakasiyana siyana. Pakati payo pane:
Mhan'ara data rekushandisa rewebhu
Tora matanho kana mubereki kana muchengeti achivhara URL kana kutanga kushandisa zvinorambidzwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iko kushanduka kwekudzora kwevabereki pane iOS uye iPadOS nekuburitswa kweNguva yekushandisa API
Teregiramu inovandudzwa nemavhidhiyo mafoni pamwe nevanoona 1000